Arduino IDE 2.0 (beta): fanambarana ofisialy ny tontolon'ny fampandrosoana vaovao | Avy amin'ny Linux
Arduino IDE 2.0 (beta): fanambarana ofisialy ny tontolon'ny fampandrosoana vaovao
Isaac | | fampiharana, fandaharana
Araky ny fantatrao, IDE Arduino io dia tontolon'ny fampandrosoana tafiditra ho an'ny Arduino sy ireo tabilao mifanentana aminy. Amin'ity tontolo ity dia afaka manoratra ny sarisarinao ianao ary mamindra azy ireo amin'ny takelaka hanombohana miasa miaraka amin'ity sehatra fampandrosoana ity izay malaza be amin'ireo mpankafy sy mpanao am-pandrosoana.
Arduino IDE, na eo aza ny toa toa inona, dia manohy mivoatra hanatsara an'ity tontolo ity nanomboka teo hanomboka amin'ny 2005. Nanomboka teo, ireo zavatra roa izay tsy miharihary amin'ny mpampiasa dia novaina, ary koa ny zavatra sasany momba ny interface graphique mba hahatonga ny fandaharana ho mahafinaritra kokoa.
Amin'izao fotoana izao, ity malefaka be ny tontolo iainana, manohana sehatra isan-karazany, anisan'izany ny Linux, ary koa misy amin'ny fiteny 66 isan-karazany, toy ny Espaniôla, miaraka amin'ny fanohanan'ny birao ofisialy sy tsy ofisialy hatramin'ny 1000. Ho fanampin'izay, manana boky an'arivony izy izay afaka manampy, ary maherin'ny 39 tapitrisa ny fisintomana mandritra ny taona lasa.
Inona no Vaovao ao amin'ny Arduino IDE 2.0 Beta
Fa izany rehetra izany dia ho tantara fotsiny raha tsy noho ny fampiononana iandraiketan'izy ireo mitohy ny fampandrosoana azy miasa tsy miato mba hanatsara kokoa ity rindrambaiko ity. Porofon'izany ny fanambarana ankehitriny an'ny Arduino IDE 2.0, izay efa manomboka "mampiseho ny lohany", na eo aza ny maha Beta version azy (andramo eto).
Ao amin'ity kinova vaovao an'ny Arduino IDE ity dia misy vaovao mahaliana izay hiafara amin'ny ny kinova farany, na dia mbola misy zavatra kosehina aza ity kinova andrana ity ary mety hanome olana vitsivitsy izay hamboarina amin'ny famoahana farany.
Anisan'ireo zava-baovao, azon'izy ireo atao ny manasongadina ireo fiasa mandroso izay hiseho amin'ity kinova ity. Arduino IDE dia manohy mitazona ny interface interface ho tsotra, ho an'ireo mpampiasa vao manomboka, saingy izao dia hampiditra endri-javatra mandroso vaovao. Ohatra, ny debugging mivantana, izany hoe afaka mamoaka kaody amin'ny tabilao mifatotra ary ajanony amin'ny tsipika manokana hijerena ny atin'ny fiovaovana, ny fahatsiarovana, ny fisoratana anarana sns, ary hahafahana mamantatra olana.
Etsy ankilany, misy koa a mpamoaka lahatsoratra maoderina, manome traikefa ho an'ny mpampiasa tsara kokoa noho ny interface mahay mandray, ny hitsin-dalana, ny famolavolana fanoloran-kevitra hanondro ireo miovaova, asa sns ... ary fanangonana haingana kokoa. Mihazakazaka misimisy kokoa na dia amin'ity kinova Arduino IDE 2.0 Beta ity aza.
Ary raha tsy ampy izany dia manohana ny rehetra ny debugging mivantana tabilao arduino ary ireo mifototra amin'ny SAMD sy Mbed. Mazava ho azy, ny mpihazona ny kaody dia misokatra ihany koa ho an'ny tabilao antoko fahatelo mba hanampiana ny tabilao hafa.
El IDE vaovao mifototra amin'ny rafitra Eclipse Theia, izay mifototra amin'ny maritrano mitovy amin'ny VS Code, raha ny eo aloha kosa voasoratra amin'ny TypeScript, ary ny ankamaroan'ny any aoriana kosa dia voasoratra ao Golang.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Arduino IDE 2.0 (beta): fanambarana ofisialy ny tontolon'ny fampandrosoana vaovao
BIND DNS izao dia manana fanohanana DNS fanandramana amin'ny HTTPS